A tọhapụrụ mmelite igwefoto ọhụrụ maka Galaxy S20 | Gam akporosis
Ọzọ Samsung ebuputa a software update na-ahụ maka melite foto arụmọrụ nke ese foto nke Galaxy S20 usoro.
Kemgbe ọ malitere na February, Galaxy S20, ọ bụ ezie na a katọrọ ha nke ọma maka nsonaazụ ha na modulu igwefoto ha, nke so n'etiti ndị kachasị mma taa, ahapụla ọtụtụ na ụlọ ọrụ South Korea obere afọ ojuju, ruo otu a na oke maka mmelite na-aga n'ihu ịdị na mobiles ndị a; Ọ bụ kpọmkwem n'ihi nke a ka Samsung amalitelarị ọtụtụ mmelite na-ebuli igwefoto ya, na OTA ọhụrụ nke na-agagharịrị na-arara onwe ya nye nke a.
La OTA nke malitere inye ụbọchị mbụ nke ọnwa a nwere mmelite maka igwefoto, mana ọ na-enye ya naanị na Galaxy S20 nkeji rere na Taiwan na Hong Kong. Ngwunye ngwa ngwa ọhụrụ anyị na-ekwu ugbu a abụghị ihe ọ bụla karịa otu mmelite, mana maka ahịa mba ụwa, yabụ na-agbasasịrịrị ụwa niile nwayọ nwayọ.
Mmelite ahụ ewuwo G98xFXXU1ATCT, ebe "x" dị iche dabere na ụdị S20 ị nwere. Ọ dị naanị ihe karịrị 290MB ma na-agbakwụnye ihe nchekwa nchedo Eprel, n'etiti obere mmezi ahụhụ na njikarịcha.
Na-enweghị oge ọzọ, anyị na-ahapụ mpempe akwụkwọ data nke Galaxy S20 usoro n'okpuru:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » A tọhapụrụ mmelite igwefoto ọhụrụ maka Galaxy S20
Blackview BV9900 Pro bụ ekwentị dị larịị nke nwere ikike 4K na teknụzụ ntanetị